Qaybaha Taangiga Taangiga, Qaybaha Taangiyada Haamaha, Qaybaha Saldhigga Shidaalka - Jiasheng
Qaybaha Taangiyada Haamaha
API Boorka Cap
Qaliinka Degdega ah
Ventor Recovery Vent & Madax
Cabbiraaddu Way Karaysaa
waxaan ku siin tayo sare leh.
Adapter shidaalka shidaalka API Camlock Adapling Adapter
fiiri faahfaahin dheeraad ah>
Madax Soo-kabashada Uumiga
Madax Haanta Hubinta Liiska Booyadaha
Madax Hubinta Uumiga
Cadaadiska Vacuum Valve
Xaalada Degdega ah Madax
Daboolka Gawaarida Booyadaha
Saliida Shidaalka Shidaalka Bucke
Jiangsu Jiasheng Petroleum Tech Co., Ltd. waxay ku taalaa Xuzhou, Gobolka Jiangsu, oo leh gaadiid ku habboon tareenka, wadada weyn iyo duulimaadka. Shirkaddayadu waa soo saare takhasus leh oo isku dhafan naqshadeynta, wax soo saarka iyo iibinta guud ahaan dabiiciga. Shirkadayadu waxay soo saartaa oo iibisaa qaybo taangiyada kala duwan, qaybo saliida, qaybaha gaadhiga waraabinta, aluminium iyo birta biraha isku xidha oo dhakhso leh, waji laba-gees ah iyo seddex-baal-marin, matoorro dhexdhexaad ah iyo kuwo hooseeya oo baatroolka kiimikada ah, Qaybaha haanta gaaska ka soo kabashada heerka yurub.
Waa maxay waalka subsea waalka
Tanker subsea valves waxaa sidoo kale loo yaqaan 'pneumatic valves, pneumatic subsea valves, valves valves', iyo Emergency valves-ka. Tan iyo markii ay jireen shilal badan oo xawaare sare leh iyo tunnel tunnel oo ka mid ah gawaarida badeecadaha halista ah ee Shiinaha sanadkii 2014, waaxaha gobolka ee la xiriira ayaa xoojiyay kormeerka ...
Maxaan u fiirsadaa marka gaariga haanta uu kulayl ka imaanayo?
1. Kahor hawlgalka uumiga, baaritaanka ka hortagga qulqulka ayaa loo baahan yahay in laga saaro. Ka dib markii hawsha uumiga la dhammeeyo oo haanta la qaboojiyo, waxaa laga soo celin doonaa golaha cusub. 2. Kahor qalliinka uumiga, fiilada wax lagu buufiyo ee hoose ee waalka subsea waxay u baahan tahay in laga saaro. Kadib ...
Dusha sare ee birta birta ah ee birta ah ma daxalaa?
Waa maxay birta birta ah? Marka dad badani fahmaan, "birta aan xarka lahayn" waa bir aan miridh ka daadin doonin, laakiin macaamiil badan ayaa soo saara baro baro marka miridhku ka soo baxo dusha sare (dhibco) bunni ah. Waa maxay sababtu? Fiilooyinka birta ahama waxay leeyihiin abilit ...
Maxaan sameeyaa haddii qoriga isdifaacida shidaalka uusan is-daboolin karin?
In qoriga shidaalka ee gawaadhida shidaalka isdifaaci kara inta badan waxay kuxirantahay in qolka faakuumku uu sameyn karo faaruqin ku filan. Sidaa darteed, marka qoriga shidaalka si iskiis isu shaabadeyn karin, waa in badanaa lagu xaliyaa fikradaha soo socda: 1. Hubi haddii shaabadda isku xirnaanta ba ...
Wang Ji Maskaxda Warshadaha, Degmada Suining, Magaalada Xuzhou, Gobolka Jiangsu, Shiinaha